के तपार्इलाई प्रेमी वा श्रीमानले साँचो माया गरेका छन् ? यसरी जाँच्नुस सबै थाहा हुन्छ ! » Khulla Sanchar
थोरै मात्र पुरुषहरुले आफ्नी केटि साथीलाई साँचो प्रेम गर्दछन् । धेरै पुरुषहरुको धारणा महिलाहरुसँग मोजमस्ती गर्ने, जिस्कने, उपयोग गर्ने र छोड्ने हुन्छ । कुनै पनि महिलाले आफूलाई प्रयोग गरेको सहन सक्दिनन् त्यसैले पुरुषले महिलालाई साँचो प्रेम गरेको हो कि नाटकमात्र गरेको हो त भन्ने कुरा थाहा पाउन अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । महिलाहरुले उनीहरुको हाउभाउमा ध्यान दिनु जरुरि हुन्छ ।
यदि तपाईंको प्रेमीले तपाईंलाई बारम्बार कुनै बाहानामा स्पर्श गरिरहन्छन् भने उनलाई तपाईं राम्रो लाग्छ । यसमा उनको उद्देश्य भनेको तपाईंको ध्यान उनीतर्फ आकर्षितण गर्नु हो ।
यदि कुनै पुरुष तपाईंलाई देखेर लजाइरहेको छ भने उसले तपाईंलाई मनमनै माया गरिरहेको छ भनेर सम्झनुहोस् । तर यस्तो पनि होइन कि पुरुषहरु कहिलेपनि लजाउँदैनन् । राम्री महिलाहरु देख्नेबित्तिकै पुरुषहरु लजाउने गर्दछन् किनभने यो उनीहरुको स्वभावभित्र पर्दछ ।
कहिलेकाँही पुरुषहरु महिलाको नक्कल गर्ने गर्दछन् , यो पनि उनीहरुको माया गर्ने एक तरिका हो । यो स्वाभाविक हो कि यदि तपाईं कसैलाई मन पराउनु हुन्छ भने उनी जस्तै बन्ने प्रयास गर्नुहुन्छ ।
पुरुषहरु महिलालाई देख्ने बित्तिकै मुसुक्क हाँस्ने गर्दछन् । कुनै पुरुषले एक महिलालाई माया गर्छ भने उनले ती महिलालाई मिठो मुस्कानका साथ हेर्ने गर्दछ ।
तपाईंको कम्मरमा हात राख्नुः
आँखा झुकाएर कुरा गर्नुः
यदि तपाईं कुनै पुरुषसँग कुराकानी गरिरहनुभएको छ र कुरा गर्ने क्रममा ती व्यक्ति निकै डराएको र बोल्दा हड्बडाउने गरिरहेका छन् र कुरा सुरु गर्न आत्तिरहेका छन् भने भने ती पुरुष तपाईंको मायामा परेको सम्झनुहोस् । एजेन्सी